🥇 Samsung Galaxy S22: Ihe Anyị Chọrọ --hụ - 【Comparison】
Samsung Galaxy A21s - 6.5 "Smartphone (4 GB Ram, 128 GB Esịtidem Memory, WiFi, Octa Core Processor, 48 MP Main Camera, Android 10.0) Agba Black
Igwefoto ekwentị mkpanaaka: Igwefoto igwefoto 48 MP, igwefoto elekere 2 MP, 8 MP ultra wide wide, 2 MP nnukwu igwefoto na 13 MP aha n'ihu igwefoto
Samsung Galaxy S22: ihe anyị chọrọ ịhụ
Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus na Galaxy S21 Ultra ka kụrụ ụlọ ahịa, ọtụtụ n'ime shelf ndị ahụ bụ nke mebere n'ihi ọrịa Covid-19, mana anyị na-echeworị ihe ụlọ ọrụ nwere ike imeziwanye. Maka Samsung Samsung S22 usoro a na-apụghị izere ezere.
Amabeghị ọtụtụ ihe banyere Samsung ga-akwadebe maka ama ama S-akara ama ọzọ, ọ ga-abụ na anyị ga-anụ maka Samsung Galaxy Note 21, Galaxy Z Fold 3 na Galaxy Z Flip 3 tupu ha anụ maka S22.
Agbanyeghị, n'okpuru, anyị ga-achịkọta nyocha niile, asịrị na akụkọ anyị nụrụ banyere Samsung Galaxy S22 na ọnwa 12 na-esote. Anyị ga-esochi anya nkọwapụta ụbọchị atọhapụ nke Galaxy S22, ọnụahịa, atụmatụ na ndị ọzọ.
Maka ugbu a, anyị etinyela ọnụ ọgụgụ kachasị mma nke ihe anyị chọrọ Samsung iji melite maka flagship ọzọ ya bụ S.
1 Bịa na isi
2 Samsung Galaxy S22 weputara ubochi na ego
3 Akụkọ na ntapu
4 Ihe anyị chọrọ ịhụ
5 1. Dochie njide microSD
6 2. Gụnye nhọrọ nchekwa ka mma
7 3. belata ego ọbụna n'ihu
8 Mee ka mbipụta dị iche iche dịkwuo ụtọ
9 5. Zere mgbukepụ
10 6. Mụbara ndakọrịta na stylus na Ultra
Bịa na isi
Kedu ihe ọ bụ? Samsung's flagship ekwentị nke 2022
Kedu mgbe ọ pụtara? Ikekwe mmalite 2022, ikekwe Jenụwarị
Ego ole ka ọ ga-eri? Tụọ anya € 799 / € 769 / AU 1,249 XNUMX na ndị ọzọ
Samsung Galaxy S22 weputara ubochi na ego
Amabeghị ọtụtụ ihe banyere ụbọchị mmalite nke Samsung Galaxy S22, mana anyị na-atụ anya na Samsung ga-agbaso usoro iheomume dịka atụmatụ ya maka 2021, ebe ụlọ ọrụ na-egbu oge mbido ya site na afọ ndị gara aga ma kpughee ekwentị ahụ n'etiti ọnwa Jenụwarị.
Ọ pụtara na anyị ga-ahụ usoro Samsung Galaxy S22 na Jenụwarị 2022? Enweghị nkwa ọ bụla na Samsung nwere ike ikpebi ịlaghachi na ebe ọ na-ebupụta na February ma ọ bụ March. Site na nke ahụ, ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịkwalite mbido ma kpọsaa igwe na mbụ.
(Ebe E Si Nweta Foto: LaComparacion)
Ihu ọma, ọ dịghị onye maara ihe ị ga-atụ anya n'aka Samsung, mana anyị ga-ahụrịrị ịnye nkọwa ndị ọzọ mgbe nkwụsị ahụ malitere inye anyị atụmanya doro anya nke ụbọchị ịhapụ.
Ọ bụ otu maka ọnụahịa ahụ, yabụ na anyị amaghị ihe ọ bụla ma, mana anyị na-atụ anya na otu ọnụahịa dị ka Galaxy S21 lineup. Samsung Galaxy S21 malitere na € 799 / € 769 / AU 1,249 21, S999 Plus na € 949 / € 1,549 / AU € 21 na S1,199 Ultra na € 1,149 / € 1,849 / AU € XNUMX.
N'okpuru ebe a bụ ọtụtụ azụmahịa kachasị mma dị ugbu a na usoro flagship nke 2021 nke Samsung.
Taa kacha mma amụọ maka Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 Plus na Samsung Galaxy S21 Ultra
Nkeji na-akparaghị ókè
(budata ọsọ ọsọ nke 5 ruo 12 Mbps, bulite ọsọ nke 2 ruo 5 Mbps)
Akụkọ na ntapu
Anyị anụbeghị ihe ọ bụla akọwapụtara banyere Samsung Galaxy S22 gbasara ụdịdị anyị na-atụ anya ya. Otú ọ dị, anyị nwere ike ịnakọta ozi na ụfọdụ isi leaks si Samsung.
Dịka ọmụmaatụ, ụdọ na-atụ aro na Samsung na-arụ ọrụ ugbu a na Exynos 9855 chipset, a na-atụ anya na ọ ga-adị njikere maka ekwentị 2022. Amabeghị ihe banyere mgbawa a, mana ọ na-enye anyị echiche nke ihe nlereanya ahụ. .
Samsung egosila na ọ gaghị etinye chaja n'ime igbe nwere smartphones n'ọdịnihu, yabụ na-atụ anya ịzụta chaja dị iche n'akụkụ Samsung flagship ma ọ bụrụ na ịnweghị.
Ihe anyị chọrọ ịhụ
Ka anyị na-eche ịmụtakwu banyere Samsung Galaxy S22, anyị nọ na-eche maka ụfọdụ mmelite anyị ga-achọ ka ụlọ ọrụ ahụ mepụta n'usoro flagship ya ọzọ
1. Dochie njide microSD
Ọ dị mfe, ọ bụkwa usoro doro anya maka Samsung, ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ na-enye nkwado microSD na ekwentị ya. Maka ndị na-amaghị ọnọdụ ahụ, Samsung Galaxy S21 dị nso enweghị oghere kaadi microSD, nke pụtara na ị gaghị enwe ike ịgbasa nchekwa ahụ.
You zụta Samsung Galaxy S21 Ultra 128GB? You rapaara na ego nchekwa a n'agbanyeghị oge ị na-eji ekwentị. Nke a bụ ikpe maka ụdị ndị ọzọ dị ka Apple, mana anyị họọrọ ya mgbe Samsung nyere nhọrọ iji gbasaa nchekwa ya.
2. Gụnye nhọrọ nchekwa ka mma
Samsung Galaxy S21 (Ebe E Si Nweta Foto: LaComparacion)
Na mbipụta nchekwa, a na-atụ anya ka Galaxy S22 nyekwuo nhọrọ nchekwa iji họrọ. Nke a bụ eziokwu karịsịa ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ ekpebie na ọ chọghịzi inye nkwado maka kaadị microSD.
Dịka ọmụmaatụ, Galaxy S21 dị naanị na 128GB na 256GB nchekwa nha. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ohere karịa, ị kwesịrị ịga maka nnukwu Galaxy S21 Ultra.
3. belata ego ọbụna n'ihu
Samsung Galaxy S21 lineup adaala na ọnụahịa ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere smartphones na 2020, nke ahụ bụ ihe dị mma site na ụlọ ọrụ ahụ, mana anyị ga-achọ ịhụ ka ọnụ ahịa dara karịa na 2022.
N'ezie, nke a bụ nnukwu ọchịchọ. Galaxy S21 Ultra juputara na teknụzụ dị elu, yana ọ ga-abụ na ụlọ ọrụ ahụ agaghị enwe ike belata ọnụahịa ya karịa ka ọ mere na ekwentị 2021.
Nke ahụ kwuru, enwere ọtụtụ nkọwa nkọwa mgbe atụnyere Galaxy S21 na Galaxy S20. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ na-aga n'ihu na-enye obere nkọwa dị ala karịa ihe anyị na-emebu, ọ ga-amasị anyị ka ọnụahịa ahụ daa n'ihu iji gosipụta nke ahụ.
Mee ka mbipụta dị iche iche dịkwuo ụtọ
Samsung Galaxy S21 Plus (Ebe E Si Nweta Foto: ọdịnihu)
Samsung Galaxy S21 na Galaxy S21 Plus nwere ike ọ gaghị abụ smartphones kachasị akpali akpali, mana ha ka bụ nnukwu nhọrọ. Anyị nyere onye ọ bụla n’ime ha kpakpando anọ na LaComparacion, wee daa kpakpando anọ na ọkara maka ntakịrị ọhụụ Galaxy S21 Ultra.
Anyị ejighị n'aka etu, mana ọ ga-amasị anyị ịhụ atụmatụ ndị ọzọ na-aga ekwentị abụọ a dị ọnụ ala nke ga-ebido na 2022. Ọ ga-amasị anyị ịhụ ụlọ ọrụ na-ewebata atụmatụ dị elu dịka S Pen ma ọ bụ lens zoom telephoto dijitalụ. nke 100x.
Galaxy S21 na Galaxy S21 Plus dị ntakịrị karịa ndị bu ha ụzọ, yabụ anyị ga-achọ Samsung iji mee ka ụdị na-abịanụ na-atọ ụtọ mgbe ha rutere na 2022.
5. Zere mgbukepụ
Ọ bụghị ihe mmadụ niile na-eche banyere ya, mana Galaxy S21 siri na enyo iko pụọ gaa n’azụ Glasstic. Ọ bụ aha Samsung kwesịrị ekwesị maka ngwakọ iko-plastik, ọ naghị adịkwa mma niile.
A na-ejikwa iko mee ka Galaxy S21 Plus na Galaxy S21 Ultra, anyị ga-achọ ka ụlọ ọrụ ahụ họrọ maka ihe a na ụdị niile nke Samsung Galaxy S22 nyere ọnụahịa nke smartphones ndị a.
6. Mụbara ndakọrịta na stylus na Ultra
S Pen na-arụ ọrụ na Samsung Galaxy S21 Ultra (Ebe E Si Nweta Foto: Samsung)
Kwesighi ịzụta ama ama Galaxy Note iji rite uru nke Samsung stylus; ị nwere ike ịga maka Galaxy S21 Ultra. Anyị ahụwo ahụmịị ọrụ ahụ na-enye aka, yana maka ndị chọrọ ịnwe ngwa, nke a bụ nhọrọ dị ukwuu.
Nke ahụ kwuru, nkwado maka S Pen adịghị oke dị ka ọ dị na akara Galaxy Note. Ikwesiri ịhọrọ S Pen Pro, dịka ọmụmaatụ, iji rite uru site na atụmatụ ụfọdụ, mana ọ kabeghị. Anyị nwere olile anya na ọrụ Samsung's S Pen na 2022 maka usoro S ga-ezu ezu.